न्युनतम शुल्कमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सकेका छौं - Kavre Times Weekly | Kavre Times Weekly
न्युनतम शुल्कमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सकेका छौं
डा. इवामुरा मेमोरियल अस्पताल
३१ वर्षिय रञ्जित मारेखु विगत ३ वर्षदेखि डा. इवामुरा मेमोरियल अस्पतालले सल्लाघारीको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी समाल्नुभएका मिलनसार स्वभावका अस्पतालका व्यवस्थापक रञ्जित मारेखुसँग डा. इवामुरा मेमोरियल अस्पतालले बिरामीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सेवा सुविधाको बारेमा गरिएको कुराकानीको मुख्य अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
० डा. इवामुरा मेमोरियल अस्पतालले बिरामीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सेवा सुविधाको बारेमा प्रष्ट पारीदिनुहोस् न ?
भक्तपुर, काठमाडौं र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका सेवाग्राहीहरुलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने उद्देश्यका साथ सन १९९८ मा भक्तपुर जिल्लाको प्रथम प्राइभेट अस्पतालको रुपमा स्थापित भएको हो । २१ बेड क्षमता भएको यस अस्पतालमा २४ सै घण्टा बिरामीहरुलाई उपचार सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । ओभेरियन सिटको, आमाको कोखमा बच्चा नबस्नुको समस्याको, तल्लो पेट दुख्ने समस्याको जाँच, भिडियो एक्सेबाट थाह नहुने समस्याको जाँच, दुर्विन प्रविधिबाट पाठेघरको शल्यक्रिया, महिनावारी गडबडी समस्याको परिक्षण लगायतका सेवाहरु विरामीहरुलाई उपलब्ध गराउँदै आएका छौं ।
० स्त्रीरोग सम्बन्धी उपचारको बारेमा कस्ता खालका रोगहरुको उपचार हुन्छन् त ?
भक्तपुरका बिरामीहरुलाई अन्यत्र जानु नपरोस भन्ने अभिप्रायले ३ वटा स्त्री रोग विशेषज्ञहरुको व्यवस्था गरी सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाह गरेका छौं । स्त्रीहरुको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण समस्या समाधानको लागि निःशुल्क परामर्श सेवा उपलब्ध छ । ल्याप्प्रोस्कोपीको अपरेशन अत्याधुनिक प्रविधिबाट गरिन्छ । बिरामीको अवस्थालाई मध्यनजर गरी स्तरीय र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा अस्पतालका विशेषज्ञ डाक्टर, नर्स तथा व्यवस्थापकीय टिमहरुले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरी सेवा प्रदान गर्न सकेको छ ।
० यहाँले व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी समाल्नु भएको छ, अस्पतालले प्रदान गरेको स्तरीय सेवा सन्दर्भमा भन्नुपर्दा ?
मातृ शिशु स्याहार कार्यक्रम सञ्चालन, विशेषज्ञ डाक्टरहरू र नर्सहरुबाट बिरामीहरुको नियमित स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने, महिलाहरुको लागि सम्पूर्ण समस्याको निःशुल्क परामर्श सेवा प्रदान, हरेक वर्ष ग्रामीण क्षेत्रमा नाक, कान, घाँटी, महिलाहरुको पाठेघर सम्बन्धि ४ पटक जाँच निःशुल्क औषधि वितरण जस्ता कार्यहरु हाम्रो इवामुरा अस्पतालले सेवा प्रदान गरेको छ । हाम्रो मुख्य उद्देश्य नै सबै सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु हो ।
० गरिब तथा असहायहरुलाई अस्पतालले कस्तो खालको सहयोग पु¥याउन सकेको छ ?
आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, असहाय व्यक्तिहरुलाई छुटको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले नीजि क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पताललाई निम्न वर्गिय, असहाय व्यक्तिहरुलाई १०% सहयोग प्रदान गर्न नीतिगत निर्देशन दिएकोमा सोही अनुसार काम गरिरहेको छ ।
० अस्पताल सञ्चालनमा आइपरेका कठिनाइहरू तथा समस्याहरु चाहिँ के छन् त ?
हरेक संघसंस्था सञ्चालन गर्दा धेरै अप्ठ्यारा, सप्ठ्यारा परिस्थितिहरु आउन सक्छन् । समय परिस्थिति, समयको माग अनुसार प्रविधिको विकास भएको हुन्छ । नयाा प्रविधि अनुसार चल्नुपर्छ । अस्पताललाई आवश्यक पर्ने अत्याधुनिक मेसिन ल्याउनपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि आर्थिक जोह गर्नुपर्ने हुन्छ । ल्याब्रोस्कोपी गर्ने मेशिन, अल्ट्रासाउण्ड गर्ने मेसिनदेखि लिएर हरेक खालका आधुनिक मेशिन ल्याउनु समयको माग बमोजिम ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यसमा केही समस्याहरु हुन्छन् । उपचार गर्न आउने सेवाग्राहीहरुको इच्छा चाहना अनुरुप सेवा सुविधा दिने सवालका कुराहरु हुन्छन् । सबैले चाहे अनुसारको कतिपय सेवा उपलब्ध हुन्छन् । कतिपय नहुन पनि सक्छन् ।
० अस्पतालमा अधिकांश डाक्टर र नर्सहरुको विरामीको उपचार र हेरविचारमा केयरलेस ग¥यो भन्ने गुनासोहरु आउने गरेका छन् नि ? व्यवस्थापन पक्षले यसलाई कसरी हुर्नु भएको छ ?
बिरामीहरु अस्पतालमा भर्ना हुँदा डाक्टर नर्सहरुलाई के कति दिनमा निको हुन्छ भनेर सोधि रहेका हुन्छन् । बिरामीहरुमा विभिन्न खालका रोगहरुले समातेको हुन्छ । उपचार गर्दै जाँदा अस्पतालमा केही थप दिन बस्नुपर्ने हुन्छ । शुल्क त्यही अनुसार लाग्ने हुन्छ । यस्ता कुरा बिरामीहरु र बिरामीका आफन्तले बुझ्नुपर्ने हुन्छ । डाक्टर नर्सहरू समयसमयमा ड्युटीमा फेरबदल भइराख्ने हुन्छ । व्यस्तताका कारण कुनै कुनैले बिरामीहरुलाई केकस्तो समस्या छ कति सुधार भयो भनेर कतिले भनन नभ्याएको हुन्छ । यी कार्य बिरामी र बिरामीका आफन्तहरुलाई चित्त नबुझेको हुन सक्छ । डाक्टर नर्सहरुले हेरबिचार राम्रो गर्नुहुन्छ । नगर्ने भन्ने हुँनै सक्दैन । यो होराइ र बुझाईमा फरक पर्ने हुन् । केही कमी कमजोरी हुन सक्छन् त्यस्ता कमी कमजोरीलाई व्यवस्थापकीय पक्षले सुधार गर्दै लैजान्छ ।
० डा. इवामुरा अस्पताललाई थप व्यवस्थित बनाएर अघि बढाउने यहाँका नयाँ योजनाहरु के के छन् ?
हाम्रो अस्पतालका डाक्टरहरु, नर्सहरू आ–आफ्नो तह तप्काबाट बिरामीहरुको सेवामा खटिरहनुभएकै छ । समयको माग अनुसार व्यवस्थित ढंगबाट बैज्ञानिक पद्दती अनुरुप बिरामीहरुलाई अस्पतालले सेवा दिँदै आएको छ । अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई आत्मसाथ गर्दै निरन्तर अघि बढ्ने छौं । हाम्रो समाजमा विभिन्न प्रकृतिका समस्या भएका बिरामीहरु हुनुहुन्छ । प्रोस्टेट सम्बन्धी समस्या, मुत्रनली सम्बन्धी समस्या हुन्छन्, मुटुरोगी, टाउकोको समस्या, थाइराइड लगायतका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी अत्याधुनिक प्रविधिबाट हल गर्ने गरी हामी स्वास्थ्यको पहुँच ग्रामीण भेगमा पु¥याउने ३ वर्षे, ५ वर्षे रणनीतिक योजना निर्माण गरी सोवाग्राहीलाई सन्तुष्टि प्रदान गर्ने गरी गुणस्तरीय सेवा दिन हाम्रो अस्पतालको व्यवस्थापन टिम सशक्त ढंगबाट लागिपर्नेछ ।
आफ्नो स्वास्थ्यमा हेरविचार गर्ने सन्दर्भमा कुनैले हेलचेक्र्याईं नगरौं । अस्पताल आएर चेकजाँच गरी औषधी लगेपछि नियमित रुपमा औषधी खाने गरौं भन्न चाहन्छु । मानव जीवन स्वस्थ रहन शारीरिक व्यायम, योग गर्न आवश्यक छ । २४ सै घण्टा इमरजेन्सी सेवा दिएका छौं । निम्न वर्गीय, असहाय व्यक्तिहरुलाई निःशुल्क औषधी उपचार गरिएको छ । गुणस्तरीय प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने हाम्रो अभियान निरन्तर रहनेछ । अप्ठ्यारो पर्दा, पैसा नहुँदा पनि उपचार गरेर पछि रकम लिने प्रवन्ध गरी समेत उपचार सेवा दिएर मानवीय सेवा गरेर हाम्रो अस्पताल यो अवस्थामा आइपुगेको हो । न्यूनतम शुल्कमा गुणस्तरीय प्रभावकारी सेवा अस्पतालले दिएको छ ।